संस्कृति – Lokpati.com
Lokpati - Best News Portal of Nepal सोमवार, असार २९, २०७७
पक्राउ सरकार नेकपा नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रचण्ड अमेरिका अपराध प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु केपी शर्मा ओली राशिफल
मौलिक नेपाली बाजाहरूको अर्केष्ट्रा तयारीमाथि विमर्श
पशुपतिको आरती भोलीबाट बन्द हुदै
आज आमलकी एकादशी
आज ग्याल्बो ल्होसार
महाशिवरात्रि किन कसरी मनाइन्छ ?
कला/रंगमञ्च फेशन साहित्य
प्रतीक्षा बनिन् मिस कल्चरको विजेता
पोखरा ४, फागुन। छैठौ नेपाल आइस मिस कल्चर नेपाल २०२० को उपाधी हेम्जाकी प्रतीक्षा बास्तोलाले हात पारेकी छन्। उनले मस्ट कन्फिडेन्ट टाइटल समेत हात पारिन्। पुष्पाञ्जली फेसन एन्ड इभेन्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रममा फस्ट रनर अफ सपना गौतम, सेकेन्ड…
पशुपतिमा महाशिवरात्रिको तयारी
काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्रका महाशिवरात्रिका लागिविभिन्न स्थानमा सफाइ शुरु गरिएको छ । पर्वलाई सफा र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आह्वानमा स्थानीय सङ्घसंस्था गुह्येश्वरी विनायक युवा क्लब, पशुपति गुह्येश्वरी महिला…
कस्ताे छ गुरुङ जातिको वंशावली ?
विभिन्न जातजातिमा ठूलो जात र सानो जातको भेद भए जस्तै धेरै पहिले गुरुङहरूमा पनि चारजाते ठूलो र सोह्र जाते सानो भन्ने प्रचलन रहेको थियो। तर कर्णेल लछमन गुरुङको उजुरीले श्री ३ जङ्ग बहादुर बाट वि.सं. १९२४ मा गुरुङहरूमा चार जात र सोह्र जातमा…
गुरुङ जातिको संस्कार कस्ताे हुन्छ ?
प्रत्येक जातजातिमा आ–आफ्नै प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन्। संस्कार रूपी रूखको जरा प्रत्येक व्यक्तिका जीवनका हर व्यवहारमा गाँसिएका हुन्छन्। गुरुङहरूको जन्म संस्कारमा शिशुको जन्म हुनासाथ समाजको अनुभवी महिलाद्वारा सालनाल काटी शिशुलाई मनतातो…
गुरुङ जातिको भेषभुषा र पहिरन
गुरुङ जातिका मानिसहरूको भेषभूषा आफ्नै किसिमका हुन्छन्। खास गरेर बाह्य प्रभावमा नपरिसकेका गुरुङहरू साधारण किसिमको खस्रो कपडाको लुगा लगाउँछन्। गुरुङ जातिका पुरुषहरू शरीरको माथिल्लो भागमा भोटो लगाई जाङमा कछाड र त्यसको भित्र लगौंटी बाँधेका…
तमु जातिका मूख्य चाडपर्व के-के हुन् ?
सिल्दो नाल्दो पूजा तमु गुरुङहरू गाउँबस्तीको सुरक्षा तथा कुशलमंगलका लागि सिल्दो नाल्दो (सिमे भूमे) पूजा गर्दछन्। यसलाई कतै सिल्दो नाल्दो, कतै सब्तो सिप्तो र कतै साची सिल्दो भनी फरक फरक नाम दिइएको पाइन्छ। यी सबै नामहरूको अर्थ हो – “प्रकृतिको…
तमु जातिको लोक संस्कृतिभित्र के-के पर्दछन् ?
रोधीँ तमुहरूको विशुद्ध पहिचान हो। यो तमु समाजको मौलिक परम्परामा आधारित सामाजिक संस्था हो। सयौं वर्ष अगाडि तमु सभ्यताको केन्द्र क्होल सोंथरबाट रोधीँ सभ्यता र संस्कृति सुरु भएको थियो। जनश्रुति अनुसार गुरुङ भाषा ‘रोव’ को अर्थ सुन्ने र ‘धी’ को…
सुदूरपश्चिममा भुवा पर्व सुरु
राजेन्द्र बिक\_ बाजुरा, ९ पुस। प्रत्येक वर्ष पुस औंसीको अघिल्लो दिनदेखि सुरु हुने भुवा पर्व बाजुरालगायत सुदूरपश्चिका विभिन्न जिल्लाहरुमा खेलिने दशैं पछिको दोस्रो ठूलो पर्वका रुपमा मनाइन्छ। त्रेतायूगमा पाण्डव र कौरवीचको लडाई सकिएपछि…
बच्चाहरु बिग्रने १३ कारण, सुधार्ने ६ तरीका
बच्चाको भविष्यप्रति हरेक अभिभावक चिन्तित र संवेदनशील हुन्छन्। तर, बच्चाको मनोविज्ञानअनुसार व्यवहार गर्न नजान्दा वा बेवास्ता गर्दा बच्चाहरु बिग्रँदै गएको अभिभावकलाई पत्तै हुँदैन। जब बच्चा ठूलो हुन्छ, बिग्रेपछि अभिभावकका लागि सुधार्ने चुनौति…
वेदमा के छ, चार वेदको रहस्य
काठमाडौं। हामीले वेदको बारेमा त सुन्दै आएका छौं यद्यपी हामीमध्ये धेरैले यसको अध्ययन गरेका छैनौं। यसर्थ यो ग्रन्थ हाम्रो लागि रहस्यमयी छ। वेद विश्वकै पहिलो धर्मग्रन्थ मानिन्छ। के विश्वास गरिन्छ भने ईश्वरले ऋषिमुनीलाई सुनाएको ज्ञानमै वेद…